တယ်လီနော၏ အစီအစဉ်သစ် “တော်ကီစူဘူး”တွင် သည်ပြည်တွင်းကြိုက်ရာဖုန်းနံပါတ်များ စျေးနှုန်းသာစွာစိတ်တိုင်းကျ ခေါ်ဆိုနိုင်သည့်အပြင် လက်ကျန်မိနစ်များကိုလည်း သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး (၇)ရက်အတွင်း ပေါင်းစည်းသယ်ဆောင်နိုင်မည့် အစီအစဉ်ကို သုံးစွဲသူအားလုံးအတွက် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။
ပြောမကုန်လည်း စက္ကန့်တွေသယ်သွားလို့ရတဲ့ ဘယ်လိုင်းခေါ်ခေါ် တော်ကီစုဗူး
Talkie Suboo 2,700 sec
Talkie Suboo 2,700 sec 2760 Sec Validity:7Days
Talkie Suboo 5,500 sec
Talkie Suboo 5,500 sec 5520 Sec Validity: 15 Days
Talkie Suboo 11,400 sec
Talkie Suboo 11,400 sec 11400 Sec Validity: 30 Days
*666*2# သို့​ခေါ်ဆိုပြီး သော်လည်ကောင်း MyTelenor App မှ လည်းကောင်း အချိုသာဆုံး ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု အစီအစဉ်​များကို ​ရွေးချယ်​ ဝယ်​ယူနိုင်​ပါပြီ။ တယ်​လီ​နောအသုံးပြုသူများ မိသားစု မိတ်​​ဆွေ သူငယ်ချင်း ချစ်​ခင်​ရသူများ နှင့် ပိုမိုဆက်​သွယ်​နိုင်​ရန်​ တယ်​လီ​နောမှ မြန်မာနိုင်​ငံမှာ အသက်​သာဆုံး​သော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု အစီအစဉ်​သစ်​များကို မိတ်​ဆက်​​ပေး လိုက်​ပါပြီ။ အသုံးပြုသူများသည် USSD ဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ Eload ဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ တကြိမ်ထက်ပို၍ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အကြာဆုံး ပက်ကေ့ခ်ျ၏ သက်တမ်း အထိအသုံးပြု နိုင်ပါသည်။
တော်ကီစုဘူး သုံးစွဲသူများအတွက် မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းများကို တော်ကီစုဘူး မိနစ်လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ရန် တယ်လီနောမှ တော်ကီစုဘူးမိနစ်လွှဲပြောင်းခြင်း ၀န်ဆောင်မှုကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။ ထို၀န်ဆောင်မှုသည် ဖုန်းငွေလွှဲပြောင်းခြင်း ၀န်ဆောင်မှုကဲ့သို့ တယ်လီနောသုံးစွဲသူအချင်းချင်း လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါသည်။
မည်သို့ လွှဲပြောင်း မည်နည်း
*၁၂၀# (follow step by step instructions)
Prepaid customer များသာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
တစ်ကြိမ်လွှဲပြောင်းနှုန်း (ကုန်သွယ်ခွန်ပါပြီး) ဝန်ဆောင်ခမှာ ၅ဝကျပ် ကျသင့်ပါမည်။
တစ်ကြိမ်လျှင် အနည်းဆုံး ၃၀၀စက္ကန့် မှ အများဆုံး ၁၂၀၀စက္ကန့် အထိလွှဲပြောင်းနိုင်ပါမည်။
တစ်နေ့လျှင် သုံးစွဲသူများအတွက် ခွင့်ပြုထားသော အကြိမ်အရေအတွက် ၅ကြိမ် ထက် ပို၍ လွှဲပြောင်းခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ပါ။
လွှဲပြောင်းပေးသူသည် ဖုန်းမိနစ် (စက္ကန့်)လွှဲပြောင်းနိုင်ရန် လုံလောက်သော မိနစ်/စက္ကန့် လက်ကျန်ရှိရမည်။
လွှဲပြောင်းပေးသူသည် ဝန်ဆောင်ခပေးဆောင်ရန် လုံလောက်သော လက်ကျန်ငွေရှိရမည်။
လက်ခံရရှိသူသည် accountတွင် တော်ကီစုဘူး ရှိသော်လည်းကောင်း၊ မရှိသော်လည်းကောင်း ဖုန်းပြောမိနစ် (စက္ကန့်)ကို လက်ခံနိုင်သည်။
လက်ခံရရှိသူသည် တော်ကီစုဘူးရှိပါက benefit ပေါင်းသွား၍ သက်တမ်းမှာ အများဆုံးရှိသောသက်တမ်းကိုရရှိမည်။ Formula: max(active Talkie Suboo expiry, shared quota expiry).
လက်ခံရရှိသူသည် တော်ကီစုဘူး မရှိပါက ပုံမှန် တော်ကီစုဘူးကဲ့သို့ carry လုပ်ခြင်းနှင့် သက်တမ်း ၇ ရက် ရှိလိမ့်မည်။
တော်ကီစုဘူး သက်တမ်းနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ မိနစ်/စက္ကန့်ကို လွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။ Active or carry forward state နှင့် သက်ဆိုင်မှု မရှိပါ။
Charging priority သည် တော်ကီစုဘူး charging priority နှင့် တူညီပါသည်။
တော်ကီစူဘူး၏ ပက်ကေ့ခ်ျ သက်တမ်းများမှာ (၇) ရက်, (၁၅) ရက် နှင့် (၃၀) ရက်၊
တော်ကီစူဘူး၏ သက်တမ်းတိုး သယ်ယူခွင့် ကာလမှာ (၇)ရက်၊
တော်ကီစူဘူး အသစ်ကို ပက်ကေ့ခ်ျ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မှ (၇) ရက်အတွင်း ၀ယ်ပါက အသုံးမပြုရသေးသော လက်ကျန်မိနစ်များ သက်တမ်းတိုး သယ်ဆောင်သွားနိုင်ပါသည်၊
သက်တမ်းတိုး သယ်ဆောင်နိုင်သည့် (၇) ရက်အတွင်း တော်ကီစူဘူး အသစ်ကိုမဝယ်ပါက အသုံးမပြုရသေးသော လက်ကျန်မိနစ်များ ပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်မည်၊
တကြိမ်ထက်ပို၍ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အများဆုံး သက်တမ်းအား ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်၊
၁ စက္ကန့်နှုန်း ဖြင့်သာကောက်ခံမည့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊
တော်ကီစူဘူး ပက်ကေ့ချ် အား အသုံးပြုသူများ အနေဖြင့် ရှယ်စုဘူးပက်ကေ့ချ် ဝယ်ယူ အသုံးပြုသည်နှင့် တပြိုက်နက် တယ်လီနော၏ သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နှင့် ပြင်ဆင်ချက်များအား သဘောတူ လက်ခံသည်ဟု တယ်လီနောမှ မှတ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခု စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသည် မူလက ဝယ်ယူခဲ့သည့် တော်ကီစူဘူး ပက်ကေ့ချ်များ အပေါ်တွင်လည်း အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိမည်ဖြစ်သည်။
တယ်လီနောမှ တော်ကီစူဘူး နှင့် ပတ်သက်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အား အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်နိုင်ပြီးယင်း အချိန်ကာလရှိ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ နှင့် နည်းဥပဒေများမှ သက်မှတ်ထားသည့် အတိုင်း ၎င်း ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်မှုများသည် ချက်ချင်း အကျိုးသက်ရောက်မည် ဖြစ်ပါသည်။
တယ်လီနောမှ တော်ကီစူဘူး နှင့် ပတ်သက်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား တည်ဆဲ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အညီ အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး ပြင်ဆင်သည်နှင့် တပြိုက်နက် အကျိုးသက်ရောက်မည် ဖြစ်သည်။
တယ်လီနော၏ “တော်ကီစူဘူး” သည်ပြည်တွင်းကြိုက်ရာဖုန်းနံပါတ်များ စျေးနှုန်းသာစွာစိတ်တိုင်းကျ ခေါ်ဆိုနိုင်သည့်အပြင် လက်ကျန်မိနစ်များကိုလည်း သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး (၇)ရက်အတွင်း ပေါင်းစည်းသယ်ဆောင်နိုင်မည့် အစီအစဉ်သစ် ဖြစ်ပါသည်။
တော်ကီစူဘူး ၂,၇၀၀ စက္ကန့် ၄၉၉ ကျပ် ၄၉၈ ၂,၇၀၀(စက္ကန့်) ၄၆ မိနစ် ၇ ရက် ၇ ရက် *666*2*2#
တော်ကီစူဘူး ၅,၅၀၀ စက္ကန့် ၉၉၉ ကျပ် ၉၉၈ ၅.၅၀၀(စက္ကန့်) ၄၆ မိနစ် ၁၅ ရက် ၇ ရက် *666*2*1#
တော်ကီစူဘူး ၁၁,၄၀၀ စက္ကန့် ၁,၉၉၆ ကျပ် ၁၉၉၆ ၁၁,၄၀၀(စက္ကန့်) ၄၆ မိနစ် ၃၀ ရက် ၇ ရက် *666*2*3#
တော်ကီစူဘူး ပက်ကေ့ချ် ရဲ့ သက်တမ်းက ဘယ်လောက်လဲ?
တော်ကီစူဘူး၏ ပက်ကေ့ခ်ျ သက်တမ်းများမှာ (၇) ရက်, (၁၅) ရက် နှင့် (၃၀) ရက် အသီးသီးဖြစ်ကြပြီး ထိုပက်ကေ့ခ်ျများ၏ သက်တမ်းတိုး သယ်ယူခွင့် ကာလမှာ (၇)ရက် ဖြစ်ပါသည်။
တော်ကီစူဘူး၏ ပက်ကေ့ချ် သက်တမ်းအတွင်းတွင် ဝယ်ယူထားသောလက်ကျန်မိနစ်များ ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပက်ကေ့ချ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး နောက် သယ်ယူခွင့် သက်တမ်း(၇) ရက်တွင် လက်ကျန်မိနစ်များ ဆက်လက်ရှိနေပြီးအသုံးပြုလိုပါက ထို(၇) ရက် တော်ကီစူဘူး ပက်ကေ့ချ် အသစ် တစ်ခုထပ်မံ ဝယ်ယူပြီး ရရှိသောမိနစ်များ နှင့် လက်ကျန်မိနစ်များ စုပေါင်းသွားပြီး ဆက်လက် အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။
ရှိပါသည်။ ၀ယ်ယူရရှိသော တော်ကီစူဘူး၏ မိနစ်များနှင့် လက်ကျန်မိနစ်များမှာ စုပေါင်းသွားပြီး အများဆုံး သက်တမ်းအား ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
လက်ရှိရောင်းချနေသော ချန်နယ်လ်များမှာ - USSD : *666*2# My Telenor App *124# (iBCN) အထွက်ခေါ်ဆိုမှုများ ပြီးချိန်တွင် ဝယ်ယူနိုင်သော ချန်နယ်လ် (iPCN) E-Load/Power Load (*555#)
လက်ကျန်ပမာဏများကို MyTelenor app စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ USSD – *9125# ကိုခေါ်ဆိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
တော်ကီစုဘူးမိနစ်လွှဲပြောင်းခြင်း အစီစဉ်သစ်ကို တယ်လီနောမြန်မာ မှ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။ တယ်လီနော သုံးစွဲသူအချင်းချင်း တော်ကီစုဘူး မိနစ် (စက္ကန့်)ကို ချက်ချင်းလွှဲပြောင်း ပေးနိုင်ပါသည်။
တော်ကီစုဘူး မိနစ် လွှဲပြောင်းခြင်း ဝန်ဆောင်ခကို ဘယ်လို ကောက်ခံပါသလဲ?
လွှဲပြောင်းပေးသူထံမှ တစ်ကြိမ်လွှဲပြောင်းလျှင် လွှဲပြောင်းနှုန်း (ကုန်သွယ်ခွန်ပါပြီး) ၅ဝကျပ် ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
လွှဲပြောင်းနိုင်သော မိနစ် (စက္ကန့်) ပမာဏ ကန့်သတ်ခြင်းမျိုး ရှိပါသလား?
လွှဲပြောင်းပေးသူသည် တစ်ကြိမ်လျှင် အနည်းဆုံး ၃၀၀စက္ကန့် မှ အများဆုံး ၁၂ဝ၀စက္ကန့်အထိလွှဲပြောင်းနိုင်ပါမည်။
လက်ခံရရှိသူထံမှ ဝန်ဆောင်ခ ကောက်ခံပါသလား?
လက်ခံရရှိသူထံမှ ဝန်ဆောင်ခ ထပ်မံကောက်ခံခြင်း မရှိပါ။
အောင်မြင်စွာ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းကို ဘယ်လို သိရှိနိုင်မလဲ?
လွှဲပြောင်းပေးသူသည် အောင်မြင်စွာ လွှဲပြောင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းကို အောက်ပါအတိုင်း စာ ရရှိပါမည်။ “တောက်ီစုဘူး xxx Seconds ကို သို့ လွှဲပြီးပါပြီ။ ဝန်ဆောင်ခ နှင့် ကုန်သွယ်ခွန် မကောက်ခံထားပါ။
လက်ခံရရှိသော တော်ကီစုဘူး ပမာဏကို ဘယ်လို စစ်ဆေးနိုင်သလဲ?
*၉၁၂၅# ကို ခေါ်ဆိုပါ သို့မဟုတ် Mytelenor App တွင် စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုသော် code ဖြင့် ဘယ်လို လွှဲပြောင်းပေးနိုင်လဲ?
*၁၂၀# ကို ခေါ်ဆိုပါ
သူငယ်ချင်းမှာ တော်ကီစုဘူး လက်ကျန် မရှိပါ။ မိမိသည် ထို သူငယ်ချင်းဆီသို့ မိနစ် (စက္ကန့်)လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါသလား?
တော်ကီစုဘူးမိနစ် (စက္ကန့်)လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါသည်။ သူငယ်ချင်းသည် တော်ကီ စုဘူးမိနစ်လွှဲပြောင်းမှုကို သက်တမ်း ၇ ရက်ဖြင့် လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
လက်ခံရရှိသူသည် တော်ကီစုဘူးရှိလျှင် လွှဲပြောင်းပေးသော မိနစ် (စက္ကန့်)သက်တမ်းမှာ မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း?
တော်ကီစုဘူး benefit ပေါင်းသွား၍ သက်တမ်းမှာ အများဆုံးရှိသောသက်တမ်းကိုရရှိမည်။ (၇ ရက် မှ ၃ဝရက် အထိ)